Habka Lacag Bixinta Taleefanka Gacanta | Martech Zone
Qalabka Lacag Bixinta ee Taleefanka Gacanta
Talaado, July 12, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
2da sano ee soo socota, 20% dhamaan taleefanada gacanta ee la iibiyo waxay awood u leeyihiin inay lacag ku bixiyaan NFC (Near Field Communications) .. teknoolojiyad u saamaxeysa isgacan qaad iyo bixinta dhijitaalka ah marka qalabkaaga la dhigo meel u jirta dhowr inji . Dad badan ayaa saadaalinaya inay tani noqon karto dhamaadka lacagta sidaan ognahay. Shaki kuma jiro inay saameyn ku yeelan doonto sida dukaameysatada wax uga adeegtaan ugana iibsadaan alaabada tafaariiqda!
Kooxda Gerson Lehrman ayaa soo saartay tan infographic loogu talagalay waa G + Site. Sida laga soo xigtay boggooda:
G + waa beel ay ku kulmaan aqoon yahanada ugu firfircoon uguna saamaynta badan, aqoonyahanada iyo ganacsatada. G + wuxuu dadka u fidiyaa meel ay kula macaamilaan shakhsiyaadka isku fikirka ah qaabab aysan tixgalin, bilaabin wada sheekeysi cusub, weydiiyaan su'aalaha muhiimka ah waxayna soo jeediyaan fikradaha khadka tooska ah iyo shirarka shaqsiyeed.
Tafaariiq + Raadinta Maxaliga ah = Wishpond
Cusbooneysiinta Gmail… Ka daahay ka fiicnaan Marna
Jul 12, 2011 markay tahay 12:40 PM
G +? Waxaan ku rajo weynahay iyaga xamaasadan Google+ inay hoos u dhacdo, maxaa yeelay G + waxay umuuqataa soo gaabis la aqbalay ee Google+.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, infographic great!